Barnaamijyada qaarkood waxay bilaabaan inay bixiyaan aaladaha XL ee iPadOS 15 | Wararka IPhone
Angel Gonzalez | 24/09/2021 20:00 | Barnaamijyada IPhone, macruufka 15
iPadOS 15 ayaa kordhisay wax soo saar nidaamka qalliinka marka la eego iPadOS 14. Is -dhexgalka maktabadda app -ka ama dib -u -qaabaynta badan ayaa ka dhigtay hawlgalka iPad -ka mid aad u tayo badan isla mar ahaantaana u dhaqso badan waxtarna u leh isticmaalaha. Arrin kale oo cusub oo timid ayaa ah XL widgets, weyn taas oo u oggolaanaysa inay soo bandhigto macluumaad badan oo nooc kasta leh iyo kuwa horumariyayaashu u abuuri karaan dalabyadooda. Dhab ahaan, barnaamijyo badan ayaa cusboonaysiiya oo sii deynaya aaladooda gaarka ah qaab XL ah sida Waxyaabaha 3, Fantastical ama CARROT Cimilada.
Macluumaad dheeri ah oo ku saabsan aaladaha XL ee iPad -ka leh iPadOS 15
Waxaad hadda dhigi kartaa widget -yada u dhexeeya barnaamijyada iPadkaaga. Waxa kale oo lagu heli karaa cabbir weyn si ay uga faa'iidaystaan ​​shaashadda.
Waxyaabaha 3 waa mid ka mid ah barnaamijyada wax -soo -saarka ugu badan ee laga soo degsado App Store. Dhowr maalmood ka hor waxaa loo cusbooneysiiyay nooca 3.15 waxayna soo bandhigtay astaamo cusub oo loogu talagalay aaladaha leh macruufka 15 iyo iPadOS 15. widget -yadeeda XL ee iPad -ka ayaa laga heli karaa nuqulkan. Waxay ku saabsan tahay widget -ka Kadib kan kalena wuxuu bixiyaa liis gaar ah si aad u aragto waxyaabo badan oo ku saabsan liisaskayaga.
Jaleecada kaliya waxaan ku arki karnaa liisaskayaga shaashadda oo aan geli karnaa oo aan la falgeli karnaa shaashadda guriga. Intaa waxaa dheer, widget -yadaani waa la beddeli karaa marka loo eego Mawduucooda ama si toos ah ayey u geli karaan abuurista hawlo cusub.
YouTube ayaa sidoo kale ku dhawaaqday widget -yada XL ee iPadOS 15. YouTube -ka ka sokow, waxay sidoo kale iibsadaan widget -yada Sawirrada cusub ee Google. Waxay diyaar noqon doonaan maalmaha soo socda waxayna yeelan doonaan shaqooyin la mid ah kuwii hore loo heli jiray maanta laakiin ka baaxad weyn. Xaaladda YouTube -ka, waxay noo oggolaanaysaa inaan helno muusig dhowaan la dhageystay, fannaaniin iyo albums. Marka laga hadlayo Sawirrada Google, waxaan yeelan karnaa sawirrada aan rabno si weyn si aan u siinno taabashada shaqsiyeynta iPad -ka.
Barnaamijyada Flexibits ayaa sidoo kale helay aalado cusub. Xaaladda Fantastical, waxaad heli kartaa jadwal aad u weyn oo leh qayb gaar ah oo dhammaan dhacdooyinka lagu calaamadeeyay qaybta u dhiganta iyo jadwalka ay ka muuqdaan. Intaa waxaa dheer, waxay u oggolaaneysaa gelitaanka shirarka telaamiga ah oo leh riixitaanka badhanka.
Iyada oo leh koodh midab leh, Fantastical wuxuu kuu oggolaanayaa inaad kala soocdo maalmaha toddobaadka iyadoo ku saleysan dhacdooyinka aad haysato iyo sida aad ugu mashquulsan tahay maalmahaas oo dhan. Iyada oo leh aaladahaan XL -ga ah waxa ku jira si fudud oo muuqaal ah ayaa lagu heli karaa.
Fantastical - Kalandarka & Hawlahafree
Ugu dambayntii waxaan haynaa CARROT Weather, barnaamij ka duwan sidii loo hubin lahaa cimilada. Iyada oo la adeegsanayo garaafyada iyo astaamaha nooc kasta leh waxaa loogu talagalay in lagu bixiyo saadaasha cimilada oo dhammaystiran. Iyada oo cusboonaysiinta cusub, laba widgets XL ayaa lagu daray kuwaas oo hagaajin kara hawlgalkeeda macluumaad dheeri ah iyada oo loo marayo rukummada Premium iyo Ultra.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Barnaamijyada IPhone » Barnaamijyada qaarkood waxay bilaabaan inay siiyaan aaladaha XL ee iPadOS 15
Apple Watch Series 7 waxay bixisaa 60,5 GHz wareejinta xogta wireless laakiin ma furna